Tontolom-bolongana Amin’ny Teny Arabo, Fanehoankevitra Mikasika Ireo Fipoahana Tany Laondra · Global Voices teny Malagasy
Tontolom-bolongana Amin'ny Teny Arabo, Fanehoankevitra Mikasika Ireo Fipoahana Tany Laondra
Voadika ny 04 Desambra 2017 8:04 GMT
Mikasika ilay fipoahana tao Laondra, nahita fanehoankevitra fohy maro avy amin'ireo mpitoraka blaogy avy any Ejipta sy Siria aho tamin'ny fikarohana fanehoankevitra tao amin'ny tontolom-bolongana amin'ny teny Arabo.
Nanapa-kevitra ny handika ny tenin'i Michael Henning i Mohammed avy any Ejipta, vavolombelona mivantana tao Liverpool St. izay niresaka tao amin'ny tranonkalan'ny BBC.
Avy any Ejipta ihany koa, i Lone Wolf, ambanin'ny lohateny ”Tsy misy Zava-baovao,” dia nanoratra: ”Tsy misy fanantenana intsony. (…) Tsy misy saina sy fatritran'olona ireo olona avy amin'ny Jihad sy al Qaeda ireo.”
Avy any Siria, nanoratra teny kely fotsiny tao anatina fanehoankevitra malaky i Abu Rummana: ”Nareo mpangalatra! Avereno ny fivavahako!”
Raha naneho hevitra mikasika ilay lahatsoratra nosoratan'i Abu Rummana, nanoratra i Rami: ”Tao anatina taona vitsivitsy, nosimban’ ireo mpangalatra ireo ny sivilizasiona sy ny tantara izay naharitra an'arivony taona no nandrafetan'ny razambetsika azy. Ary ohatrinona no sandany nanaovan'izy ireo izany? Baomba amina kilao vitsivitsy, ary fanahy very azo isaina amin'ny rantsan-tànana.”